आइतबार​, असार १९ २०७९ ०६:२९ PM
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र प्रतिफल
शनिबार ४ असोज २०७६ १०:०० AM
२०४० को दशकमा लघुवित्तले सामाजिक परिचालन र गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि ग्रामीण बैङ्क, साना किसान सहकारी, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैरसरकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमार्फत लघुवित्त कार्यक्रमहरु लागू गरिए ।
आशलाग्दा पर्यटनमन्त्री भट्टराईको उल्टो यात्रा, हरेक काम विवादमा
सोमबार ३० भदौ २०७६ ०८:११ AM
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अहिले पनि काठमाडौंका जनताले बारम्बार सम्झिरहेका छन् –कारण उनले काठमाडौंका भित्र सडकलाई चौडा गरिदिए । आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेकै कारण आज देशलाई राम्रो भएको छ । मन्त्री योगेशले पनि त्यस्तै काम गर्न सक्नुपर्छ । जाे देश र जनताले सधैँ सम्झिरहुन् ।
भारतको आर्थिक वृद्धि घट्दा नेपालमा किन रुवावासी ? आफनै देशको चिन्ता गरौं : अर्थमन्त्री
सोमबार २३ भदौ २०७६ ११:४० AM
आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी, राजश्व, राज्यले दिने समाजिक सुरक्षा र पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक तथा स्वरोजगार मिडियाले पाउने विज्ञापन पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । आज देशमा त्यही आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भइरहेको छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सरकारले बढी बोल्यो भन्ने हो भने विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा पनि त्यहि कुरा लेखिएको छ ।
आइतबार​ २२ भदौ २०७६ ०१:३८ PM
विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी, पीपीए दरमा देखिएको समस्या मात्र सम्बोधन गरे समस्याग्रस्त भएका आधा आयोजना मुक्त हुन्छन् । यो कुरा सरकारले गरिदिनु पर्यो । सरकारले सम्झौताअनुसार दिने भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत दिनुपर्छ ।
स्प्रेडदरको सूत्रमा पुनरावलोकन हुनैपर्छ, नत्र वित्तीय स्थायित्व संकटमा
मङ्गलबार २८ साउन २०७६ ०९:११ PM
सरकारको वित्तीय रणनीतिपत्रमा स्प्रेडदरलाई घटाएर ४.२५ प्रतिशतमा ल्याउने भनिएको छ । यो नीति परिवर्तन गर्न नसक्ने रामायण र महाभारत हो र ? संविधान त दर्ता भएको तीन दिनमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने सरकारले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र रणनीतिपत्रलाई किन नगर्ने ? अटल ‘डकुमेन्ट’ हैन त्यो ।
उद्योगीका व्यथा ज्यूका त्यूँ, मौद्रिक नीतिले पनि राहत दिएन : एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको विचार
बिहीबार १६ साउन २०७६ ०४:२५ PM
अहिले हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको चर्को ब्याजदर हुनु तथा ऋण नपाउनु नै हो । त्यसैले पहिलाका चुनौती र अहिलेका चुनौतीको स्वरुप फरक भएको छ ।
मर्जर किन, कसका लागि
सोमबार १३ साउन २०७६ ०४:३० PM
यदि सञ्चालक समितिको विवाद सतहमा आए पन्तले बैङ्क छाड्ने स्थिति बन्छ । विगतमा बीओकेमा लुम्बिनी नगाभिएको भए अहिले बीओकेका अस्तित्व अप्ठ्यारोमा परिसकेको हुन्थ्यो । पन्तले छाडेको स्थितिमा प्रकाश श्रेष्ठसँग सीईओ खोज्ने ताकत छैन ।
बैङ्कहरु मर्जरमा गएपछि पनि सेयर कारोबार खुला हुनुपर्छ
आइतबार​ १२ साउन २०७६ ०१:३४ PM
मिडियम र लङटर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्टस विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्नस गर्नेलाई मर्जर धेरै राम्रो हो । ऐच्छिकको व्यवस्था भए पनि धेरै बैङ्क मर्जरमा जान्छन् । विशेषगरी साना र कमजोर बैङ्क मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बैङ्कको सङ्ख्या ह्वातै घटे कार्टेलिङ हुन्छः डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीकाे बिचार
बिहीबार ९ साउन २०७६ ०८:१९ AM
बैङ्कको सङ्ख्या साह्रै थोरै भयो भने पनि त्यहाँ नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । बैङ्कहरु मिलेर कार्टेलिङ सुरु गर्न सक्छन । बजारमा मनोपोलि सिर्जना गरेर अप्ठयारो स्थिति ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो नहोस्, भनेर हामीले बैङ्कको सङ्ख्या केही कम गर्न मात्रै खोजेको हो ।
सोमबार ६ साउन २०७६ ०६:५४ PM
साझा यातायात हाम्रो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन, निजी कम्पनी हुन सक्छन् : सुन्दर यातायातका सञ्चालक भेषबहादुर थापाको विचार
सोमबार ६ साउन २०७६ ०५:१६ PM
डब्ल्यूटीओको गुम्दो साख र नेपालले चाल्नुपर्ने कदमः उद्यमी शेखर गोल्छाको विचार
आइतबार​ २२ असार २०७६ ०९:२५ AM
शनिबार २१ असार २०७६ १२:०० PM
सिमेन्ट उद्योगीको आन्तरिक ‘कलह’को उपज एमजीओ ५
बिहीबार १९ असार २०७६ ०३:०९ PM
मौद्रिक नीति, गति र थिति
सोमबार ९ असार २०७६ ०३:५१ PM